Yangon Chief Urges Investors to Keep in Touch | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceYangon Chief Urges Investors to Keep in Touch
Investment & FinanceBusinessLocal
Yangon Chief Urges Investors to Keep in Touch
Speaking atarecent workshop on helping investors, the Chief Minister of Yangon urged local and foreign investors to keep in touch with the local government so that it can provide them with timely help and support.
“We are trying to build an economically developed city and so investors need to keep in touch with us, in person or online,” said U Phyo Min Thein at the workshop on January 17. “Only then can we know what they need, what problems they are facing and how we can help.”
Yangon is the recipient of the lion’s share of foreign direct investment into Myanmar. During the first quarter of the new fiscal year, it received 47 FDIs totaling $80.722 million and two local investments worth K2.045 billion, according to data from the Yangon Regional Investment Committee.
Major sources of foreign investment during the period included China, Hong Kong, Taiwan, British Virgin Islands, India and Europe. The bulk of the investments went to the industrial sector; other beneficiary sectors included garment, bag-making, hat-making, industrial tapes, plastics and packaging materials, sportswear manufacturing and screen printing.
Under the Myanmar Investment Law, regional and state investment committees can approve foreign investments worth up to $5 million while the Union-level body called the Myanmar Investment Commission is tasked with approving investment proposals exceeding $5 million.
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုများ ကူညီဆောင်ရွက်မှှုများပေးနိုင်ရန် တိုင်းအစိုးရနှင့် အမြဲချိတ်ဆက်ထားရန် လိုအပ်နေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လာရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုများ လိုအပ်သည့် အကူအညီများရနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အမြဲချိတ်ဆက်ထားရန် လိုကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် Wyndham Grand Hotel တွင် ပြုလုပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ဝန်ဆောင်မှှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောသည်။
“ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မြို့ပြမှာ စီးပွားရေး မြို့တော်ကြီးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကြားမှာ အမြဲတွေ့နေဖို့လိုပါတယ်။ အမြဲတွေ့ဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လူချင်းတွေ့လို့ရတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အမြဲတမ်း အဆက်အဆံ ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီမှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုတွေ လုပ်တဲ့ သူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ သူတို့ဘာလုပ်တွေလုပ်ချင်လဲ ၊ ဘာတွေအခက်အခဲတွေရှိလဲ ၊ ဘာတွေကူညီရမလဲ ဒါတွေက အရေးကြီးပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုအများဆုံးဝင်ရောက်ထားသော တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ် အစောပိုင်းသုံးလအတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှု ၄၇ ခု ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀.၇၂၂ သန်း ပမာဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကာ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၂ ခု ကျပ် ၂၀၄၅ သန်းပမာဏတို့ကို အသီးသီး ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီမှ သိရသည်။
ဝင်ရောက်ထားသည့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် တရုတ် ၊ ဟောင်ကောင် ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ British Virgin Islands ၊ အိန္ဒိယ နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများမှာ စက်မှုကဏ္ဍာများအတွက် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။
လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများမှာ အဝတ်အထည်ချုပ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း၊ အိတ်ချုပ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ဦးထုပ်လုပ်ငန်း၊ တိပ်၊ ပလပ်စတစ်နှင့် ထုတ်ပိုးပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ အားကစားပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းနှင့် အဝတ်အထည်ပေါ်တွင် ပန်းထိုးပန်းကပ်သည့်လုပ်ငန်း တို့ဖြစ်သည်။
Previous articlePTTEP Rolls Out Biogas Program in Kanbauk
Next articleAIA Brings 100 Years of Experience toaSector Full of Potential